Elektron စျေး - အွန်လိုင်း EKN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Elektron (EKN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Elektron (EKN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Elektron ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Elektron တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Elektron များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ElektronEKN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0308ElektronEKN သို့ ယူရိုEUR€0.026ElektronEKN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0235ElektronEKN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0281ElektronEKN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.277ElektronEKN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.193ElektronEKN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.683ElektronEKN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.115ElektronEKN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.041ElektronEKN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0427ElektronEKN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.691ElektronEKN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.239ElektronEKN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.165ElektronEKN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.31ElektronEKN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.2ElektronEKN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0422ElektronEKN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0462ElektronEKN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.96ElektronEKN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.214ElektronEKN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.25ElektronEKN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩36.55ElektronEKN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.74ElektronEKN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.26ElektronEKN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.855
ElektronEKN သို့ BitcoinBTC0.000003 ElektronEKN သို့ EthereumETH0.00008 ElektronEKN သို့ LitecoinLTC0.000517 ElektronEKN သို့ DigitalCashDASH0.000304 ElektronEKN သို့ MoneroXMR0.00033 ElektronEKN သို့ NxtNXT2.19 ElektronEKN သို့ Ethereum ClassicETC0.00432 ElektronEKN သို့ DogecoinDOGE8.72 ElektronEKN သို့ ZCashZEC0.000313 ElektronEKN သို့ BitsharesBTS1.18 ElektronEKN သို့ DigiByteDGB1.13 ElektronEKN သို့ RippleXRP0.101 ElektronEKN သို့ BitcoinDarkBTCD0.00104 ElektronEKN သို့ PeerCoinPPC0.106 ElektronEKN သို့ CraigsCoinCRAIG13.74 ElektronEKN သို့ BitstakeXBS1.29 ElektronEKN သို့ PayCoinXPY0.526 ElektronEKN သို့ ProsperCoinPRC3.78 ElektronEKN သို့ YbCoinYBC0.00002 ElektronEKN သို့ DarkKushDANK9.67 ElektronEKN သို့ GiveCoinGIVE65.25 ElektronEKN သို့ KoboCoinKOBO6.77 ElektronEKN သို့ DarkTokenDT0.0284 ElektronEKN သို့ CETUS CoinCETI87